I-Russian Stock Exchange, into enokumangalisa kulo nyaka | Ezezimali
I-Russia Stock Exchange, Lo nyaka Unokwenzeka Unmangaliso
Lo nyaka unzima kakhulu kwiimarike zezabelo. Kodwa ukuba kukho intengiso yamanye amazwe enokuba nengeniso, yeyaseRussia. Ayothusi into yokuba ibonisa enye yeefayile ze- ukunyuka okuphezulu kwikota yokuqala yalo nyaka. Ngokuchasene neemarike zesitokhwe eziqhelekileyo ezithoba amaxabiso ngeli xesha. Nangona kunjalo, ukubheja kwizabelo zeSlavic sisigqibo esibandakanya umngcipheko omkhulu ngenxa yeempawu ezizodwa zoluhlu lwesitokhwe.
Imarike yemasheya yaseRussia ibe yenye yeemarike ezisakhasayo eye yehla kakhulu ukusukela ngo-2012 kwaye nangawuphi na umzuzu banokuwutshintsha lo mkhwa. Ukubala kwi amandla aphezulu iphezulu kunezinye ii-indices zesitokhwe. Ukufikelela kwinqanaba lokuba ibe lixesha elifanelekileyo lokuthatha isikhundla kule asethi yezemali. Nangona iimali eziphantsi zingenamandla agqithisileyo. Njengenyathelo lokuthintela ukukhusela umdla wakho njengomtyalomali omncinci nophakathi.
Kwelinye icala, unokutyala imali oyigcinileyo kwi-stock stock yaseRussia ngokusebenzisa iindlela ezahlukeneyo zotyalo-mali. Ukusuka ngqo uye kwiimarike zabo zezemali okanye ukuqesha mali mali esekwe kule nkcazo ye-equity ekhethekileyo. Ngayiphi na imeko, awuyi kuba nesisombululo ngaphandle kokujonga kakhulu indlela abaziphethe ngayo kwiimarike zemali. Ukuthintela enye imeko engafunekiyo.
1 IRussia: ukunyuka okuvelayo
2 Ukunyuka okucacileyo kweoyile
3 Ngeekhomishini ezibanzi ngakumbi
4 Ngokusebenzisa imali yotyalo-mali
5 Enye yezona zinto zinenzuzo ezivelayo
6 Intengiso entsonkothileyo yokusebenza
IRussia: ukunyuka okuvelayo
Kwicandelo lotyalo-mali kuhlala kukho amathuba oshishino kwaye kulo nyaka elinye lawo linokuba yile marike yezabelo. Kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba isebenza njani le ntengiso ikhethekileyo nenomdla. Ewe, sisikwere apho amaxabiso kwicandelo lezamandla ahlala khona. Apho iinkampani zeoyile ezinobunzima obubaluleke kakhulu. Ewe kungaphezulu kolunye utshintsho emhlabeni. Apho yenye yezona zibalulekileyo Gazprom, kwaye inokuba yindlela efanelekileyo yokuthenga ukusukela ngoku.
Ngayiphi na imeko, licandelo elinezona zinikezelo zinamandla emhlabeni. Ngazo zonke iintlobo zemigca yeshishini ukuze ukwazi ukwahlula utyalomali lwakho ukusukela ngoku. Ngoncedo olunokuthi uthathe ithuba lokuphindaphindeka kweoyile, apho igqithe khona ebalulekileyo umqobo weedola ezingama-65 umphanda Kwiimarike zezemali eziphambili. Ewe, yimakethi eyiSlavic enokuthi ibambe kakuhle ukuvela kwale asethi ibalulekileyo yezemali. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba ungenza ukonga okunengeniso ngakumbi ngakumbi kunangaphambili.
Ukunyuka okucacileyo kweoyile
Kukubaluleka koku kubheja kwimarike yemasheya ukuba ufuna ukuqokelela ukonyuka kwe- Ixabiso leoyile ekrwada Olunye ukhetho olunomdla onalo yile yengxowa evela empuma yelizwekazi elidala. Kungenxa yokuba kunemali eninzi onokuyifumana ukusukela ngoku ukuba uyazichaza ngale ndlela intsha yokusebenza kwiimarike zezemali. Ngokuchanekileyo ngenxa yokunxibelelana kwayo ngokucacileyo kunye necandelo leoyile eliphuhlisa Rally yenkomo eziza kusebenza kakhulu ekuvuleni izikhundla kwezi zikhundla zintsha kunangaphambili.
Kwelinye icala, inenye ngaphezulu kokubalaseleyo kwe iinkampani zerhasi. Ngale ndlela, awungekhe ulibale ukuba iRussia lelinye lawona magunya makhulu kweli candelo lezamandla. Kwaye ngenxa yoko, inika zonke iintlobo zeenkampani ezinezi mpawu. Apho ungathatha khona isikhundla ukuze uxhamle kwezi ntengiso zeemarike zezemali. Nokuba leliphi na icebo oza kulisebenzisa kulo nyaka. Kodwa ukwazi ngamaxesha onke umngcipheko owuthathayo kolu hlobo lomsebenzi kwimarike yemasheya.
Ngeekhomishini ezibanzi ngakumbi
Ngayiphi na imeko, eyona nto iphambili kukuya kwiRussian Stock Exchange kukuba uya kuba nayo iindleko eziphezulu kulawulo yokusebenza. Phantse iphindwe kabini kunentengiso yezabelo zamazwe. Kwelinye icala, ayingabo bonke abalamli abanokusebenza ngolu tshintshiselwano lukhetheke kakhulu. Awunaso esinye isisombululo ngaphandle kokunxibelelana nebhanki esebenza neli nxalenye lejografi yaseYurophu. Oko kukuthi, uya kuba neenkcitho ezingaphezulu kunokuba ubusebenza ngesalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35. Yinto ekufuneka ubenayo kwasekuqaleni.
Enye into ekufuneka uyivavanyile kukuba ukubekwa esweni kwamaxabiso kuya kuba nzima ngakumbi kunangoku. Akumangalisi ukuba, kungothusi ukuba uninzi lweenkampani ezikolu luhlu lwesitokhwe alwaziwa kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngomnye umngcipheko ongezelelweyo ekufuneka ujongane nawo ukuba ufuna ukutyala imali kwezona ntengiso zamashishini zingahanjiswa okwangoku. Ukongeza, ibonakaliswa ngu ungazinzi kakhulu kwaye yile nto eyenza ukuba inike umdla kakhulu kubona batyalo-mali bacingayo kwicandelo.
Elinye icebo onalo ngaphambi kokuba utyalomali kwimarike yemasheya yaseRussia yile mveliso yemali. Iya kukunceda ukwahlula ukonga, kodwa ngomngcipheko omncinci kunokuthenga nokuthengisa izabelo kwimarike yemasheya. Ngokuyinxenye kuba ezi mali zi kudityaniswe neeasethi eziyimali kumvuzo osisigxina. Ukuze ngale ndlela ukhuselwe kwezona meko zingathandekiyo kwiimarike zezabelo. Ngoluhlu olubanzi lweemali zotyalo-mali ezinokukunceda ekwenzeni izigqibo.
Ewe, ngale mveliso yemali uya kuba namathuba amaninzi okutyala kwezi marike zezimali. Ukusuka ezahlukeneyo abaphathi abathathe isigqibo sokuthengisa le modeli ikhethekileyo. Ngale ndlela, ezi mali zinokudityaniswa nezinye ii-indices zesitokhwe esiqhelekileyo. Njengesicwangciso sokunciphisa naluphi na uhlobo lomngcipheko ekusebenzeni. Kwaye kunye neekhomishini ezikhuphisana ngakumbi ngokubhekisele kwizikhundla zokuvula ezivela kwimarike yezemali yaseRussia. Kwinto efaniswe njengenye yeendlela ezizezona ziluncedo onazo ngalo mzuzu ukwanelisa le mfuno.
Enye yezona zinto zinenzuzo ezivelayo
Izabelo eRussia yenye yezona zibalo zisebenza kakuhle kulo nyaka. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba ube ngowona unenzuzo enkulu, ubuncinci kude kube ngoku kulo nyaka, oko kukuthi, kwikota yokuqala. Ngale ndlela, yenziwa njengenye yeendlela ezinokuba luncedo ngakumbi ekuzifumaneni Inzala enkulu kwezi nyanga zimbalwa zizayo kwiimarike ezibizwa ngokuba zezisakhulayo. Apho esinye sezona sikwere zibalulekileyo ngaphandle kwamathandabuzo sesisizwe sikhulu saseSlavic.
Kule meko, iimarike zezabelo zamashishini ezingenanzala emisiweyo ezazisanda kuvela zazilukhetho olufanelekileyo ngowama-2017 I-MSCI yoThengiso lweNtengiso yenye yezona zinenzuzo enkulu xa ukuphinda uvuselele phantse iipesenti ezingama-20. Ngasentla kweziphumo eziveliswe licandelo eliphambili lezalathiso zamazwe aseNtshona. Nangona kweli xesha, akunakulityalwa ukuba ii-equities zaseRussia khange ziqhube kakuhle ngokubhekisele kwinzuzo yabo. Kuba, I-MSCI iRussia barekhode ukwehla okujikeleze i-8%. Nangona eyona nto iphambili kuyo kwezi nyanga, ikukuqina okungazinzanga kwaye oku kuye kwakhokelela ekubeni amaxabiso ayo athathe ikhosi egwenxa kakhulu.
Intengiso entsonkothileyo yokusebenza
Akumangalisi ukuba sithethe ngemarike enzima kakhulu ukuba isebenze kuyo, apho inyani yokuba unokukhulisa inzuzo ephezulu ukuba ungena ngexesha elifanelekileyo. Kungenxa yokuba ukuba akunjalo, unokuzifumanisa unezinto ezininzi ezingalunganga ezinokonakalisa ibhalansi yeakhawunti yakho yokonga. Esi sesinye sezizathu zokuba kutheni isilumkiso Kufanele ukuba ibe lijelo apho utyalo-mali lwakho luphuhliswa khona ukusukela ngoku. Akumangalisi ukuba, ngokuqinisekileyo yimarike yemasheya enzima ekufuneka uyazi ngenzondelelo ethile. Ubuncinci ukuba ufuna ukukhusela izikhundla zakho kwimarike yemasheya.
Kwelinye icala, akufuneki ungayihoyi eyona datha ichaphazelekayo yoqoqosho lwayo. Kuba banokukunika umkhondo ongaqhelekanga malunga nokuba bangaya phi na iimarike zabo zezezimali. Ewe, isilumkiso sinokunikezelwa yinto yokuba uqoqosho lwaseRussia luvele kwimeko yokudodobala koqoqosho okunzulu, kangangokuba kulindeleke ukuba ukukhula okuhle kwe-1,9%, ngokweedatha ebonelelwe yi-OECD. Nangona, kunjalo, ngaphantsi kwalawo anamava amazwe asakhulayo, aya kuba ngaphezulu kwamanqanaba e-4%.
Ukuthatha ithuba kule meko intle kule ndawo yelizwekazi elidala, iimali zotyalo-mali kunye nee-ETF ezijolise kule marike zezona zixhobo zilungileyo zokwenza njalo. Abatyalomali abangena ngoku banokuxhamla ekukhawuleziseni ukukhula okwenzeka kuqoqosho lwaseRussia. Ngelixa kwelinye icala, inzuzo yeruble ikwayinto edlala ngokuxhasa inzuzo yotyalo-mali. Kwimarike enekamva elihle ngeli xesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » I-Russia Stock Exchange, Lo nyaka Unokwenzeka Unmangaliso
Utywina njani isitrayikhi?